Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada - Q. 2aad - Diblomaasi
Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada – Q. 2aad
Qabyaalada waxa ay leedahay dhibaatooyin aad iyo aad ufara badan oo aan halkaan lagu soo koobi karin, waxaan hore u soo xusay mid ka mid ah dhibaatoyinka ay leedahay qabyaalada, hadasa waxaan isku dayi doonaa in aan xuso qaar kale oo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay qabyaalada, si uu meesha inoogu sii socdo maqaalkeena sisilada ahaa oo aan oga hadlaynay dhibaatooyinka ay leedahay qabyaalad.
Dhanka Aqoonta : intaan tan u guda galin ugu horeen in aan ka bixiyo sharaxaad kooban ayaan isku dayi donaa, waa maxay aqoon yaasa ah aqoonyahaan. Inta badan waa lagu kala duwanyahay fikir ahaan qexidooda oo waxaa jira fikirada badan oo kala duwan. Waxa lagu qeexay aqoon dhanka Islaamka ayaan wax yar ka soo qaadan doonaa iyo xitaa dhanka dadka aan ahayna Muslimka waxa ay ka dhaheen aqoon.
AQOON waa in qofku u yaqaan xiriirka ka dhaxeeya Eebe wayne iyo asaga, inuu yaqaan sidda uu ula dhaqmi lahaa bulshooyinka kala duwan oo kunool dunida isla markaasna garan kara wajibaadka ka saara nolasha dhan walbo. Sidaas si la mid ah ayey ku qexaan dadyowga aan Muslinka ahayn ayagoo ka reeba kaliya garashada laga rabo qof in uu garto xirirka Eebo wayn kala dhexeeyo.
AQOONYAHAANKA waa midka kala garan kara xumaanta iyo wanaaga ama kala saari karo qaladka iyo saxa, isla markaasna garan kara xaqiiqda dunida loo keenay. Mar hadii usan garan Karin qofka xaqiiqada dhabta ah ee loo keenay dunidaan kuma tilmaami karno aqoon yahay. Aqoonyahanka waa qof wax walbo anan iska qadanaynin am ogolanaynin, isla goortaasna isticmaalo aqoontiisa si uu u kala saaro wixii xun iyo wixii san.
Waa in uu ahadaa qofka bartay cilmiga noocyadiisa kala duwan, kaliya kan hesta shahaadad lama oran karo waa aqoonyahan. Waxaa jira aqoonyahan aanan muslin ahayn, lakiin garanaayo waxyaabo badan oo u sahlaayo in uu garta wajibadkiisa aduunka ka saaran, lakiin anan garanaynin xirirka Eebo iyo asaga ka dhaxeeyo, qofkaas waa aqoonyahy lakin maaha aqoonyahan dhamaystiran am mid ay diinta islaamka sheektay oo xaqa iyo badil kala garan kara.
Akhristoo qof ku dhaqmaayo qabyaalada maku tilmaami karnaa aqoonyahan am qof leh aqoon jawaabta waa maya sidaan filaayo. Sababtoo ah qabyaalada waa waxa ugu xun oo qofka isticmaalo, astamaheeda ay ka mid tahay cadaalad daro. Aqoonyahayka dhabta ah wuxuu yaqanaa dhibaatada ay leedahay caadlada darida dhanka diinta islaamka ma xitaa dhan kasto oo nolasha ah. Qofkastoo leh aqoon oo anan si fiican u isticmaalaynin kuma tilmaami karno aqoonyahan dhamaystiran.
Soomaaliya waxaa dhacda in ay aad u isticmalaan qabyaalada kooda aqoonta bartay iyo kana an baran ayagoo ah dad muslimiin ah mesha waxaa ka cad in ay ka maqantahay aqoonyahaynka dhabta ah oo ay diinta islaamka sheektaya. Qofka in uu gartaa ALLE sababuhuu u abuuray ayaa ugu filan aqoon taasi aya ka fogayn karta xumaanta ay leedahay qabyaalada. Qof walba oo isticmaalo qabyaalad malaha aqoon mana lagu tilmaami karo aqoonyahay sababtoo ah aqoonta waxay qofka ka fogay xumaanta.
Soomalida waxaa ku yar aqoonta waan sababtay ay u isticmalaan qabyaalada oo ilaa iyo hada ay u garan layihiin dhibaatada ay leedhay qabyaalada kooda bartay aqoonta xitaa laguma tilmaami karo aqoonyahay sababtoo ah uma isticmaalin wadad loogu tala galay aqoonta. Dhibatada qabyaalada way soconee ilaa aqoonta wadada saxan loo isticmaalo. Waan asbaabta lagu dhihi karo xitaa aqoonta soomaaliy qabyaalada samay ayey ku yeelatay wayo kii bartay aqoonta xitaa iskama joogin isticmaalka qabyaalada.
Aqoonta waa waxyaabaha kala duwan ee la bartay, lakiin waxbarasha waa qeeb ka mid ah aqoonta bal aan wax ka dhaha dhibaatada ay waxbarashada u gaysatay qabyaalada.
Dhanka Waxbarashada: waxaa dhacda in badan in dadka la kala hormariyo dhanka waxbarshad qabyaalad owgeeda. Taasi waxaan ula jedaa waxaa laga yabaa in uu qof cilmi leh fursad waxbarsho oo dibada ah ama dalka ah helo oo ah fursad lacag la’aan, una qalmo in uu ka fa’idaysto qofka cilmiga leh oo dalka iyo dadka wax ku soo kordhin karo. Waxaasa dhacdo qabyaalad owgeeda in fursadaas la siiyo qof anan u qalmin oo aan cilmi lahayn meshan ay ka baxdo fa’idadii fursadaas loogu tala galay.
Waxaa dhacda mararka qaar in lagu diro fursad waxbarasho oo dibad ah qof u socdo tahriib sababtan ay tahay qabyaalad awgeeda. Waxaa taas kasii daran qofkii baxa meesha naftiisu ayuu ku wayaa, kii waa dhintay ku kalena waxbarasho ma aadin qasaaradaas qabyaaladaa ayaa u sabab ah. Xitaa waxaa dhacda in qof uu lahaa kaalmaha ugu sareeya dhanka waxbarshada sameyey dadaal fara badn lag galiyo kalintiisa mid aan si fiican wax ubaran aayadoo loo egaayo qabiilkiisa, meesha waxaa ku qalbi jawa kii sameyey dadaalka faraha badan. Am xitaa waxaa dhacdo qof cabsi lagaqabo qabiilkiisa owgeeda in asgoo dhacay imtixaanka la baasiyo.
Marka dhanka waxbarsha waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo ay qabyaalada sababtay oo aan halkaan lagu soo koobi karin. Wadanka mudo ayuu burbursanyahay, burburkaasna qabyaad ayaa ka qeeb qaadatay kaliya dhibaato uma sababin waxbarasha ee dhan kasto ayey dhibaato u sababtay. Allow cudurkaan qabyaalada inaga caafi, oo natus soomaaliya oo midowday.
Related Topics:Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada - Q. 2aad
Sida Soomaalida Mareykanka Loogu Musaafuriyo ‘Dhul Qalaad’
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Qoraaga ayaa taqaqus u leh cilmiga xoolaha iyo maamulida ganacsiga. Waxay wax ka qortaa arrimaha bulshada, cilmiga xoolaha iyo taariikhda umadaha adduunka iyo waliba sidoo kale maamulka ganacsiga.
Bariga dhexe19 hours ago
Yurub4 weeks ago